Ku soo noqoshada Ina Qaddafi ee Liibiya ma tahay ikhtiyaar dhab ah? - Jowhar somali news leader
Toban sano ka dib dhimashadii Mucamar Al -Qadaafi, Liibiya weli waxaa ka jira xasillooni darro siyaasadeed kadib toban sano oo dhiig daatay. Fowdadii waarta ayaa dhalisay nooc ka mid ah hammigii waagii Qaddaafi, qaar ka mid ah dadka Liibiya ayaa xitaa ka fakaraya suurtagalnimada in mar uun ay arkaan wiilkooda Saif al-Islam oo talada haya.
Qaddaafi, oo ahaa qof danayste ah sida arxanlaawaha ah oo 42 sano xukumayey Liibiya, ayay kacdoon -wadayaashu qabsadeen 20 -kii Oktoobar, 2011 -kii, kadibna waxaa la sheegay inuu ku dhintay magaaladiisii ​​duruufo aan weli caddeyn.
Saddex ka mid ah wiilashiisa, Mutassim, Khamis iyo Saif al-Arab, ayaa iyaguna dhintay intii ay socdeen dagaalladii 2011-kii.
Si kastaba ha ahaatee kan ugu caansan reer Qadaafi, Saif al-Islam, ayaa si maldahan u taageeray aabihiis inuu ku guuleysto isaga hal maalin oo reer galbeedku u arkeen inuu yahay dib-u-habayn awood u leh dimuqraadiyadda iyo xoreynta dalka, weli wuu nool yahay.
Saif al-Islam, ayaa koox hubaysan ku qabtay Zintan, koonfur-galbeed Tripoli, waxaa lagu xukumay dil isagoo maqan Tripoli sannadkii 2015 ka dib markii maxkamad la dedejiyey. Waxaa raadineysay Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) oo lagu soo oogay dambiyo ka dhan ah aadanaha, muddo dheer ayuu sumcad ahaan ku jiray, xitaa markii laga sii daayay xabsi ku yaal Zintan sanadkii 2017 -kii.
Nostalgia sanadihii Qadaafi?
Si kastaba ha noqotee, bishii Luulyo 2021, ninka 49-jirka ah ayaa aamusiyay oo wareysi siiyay majaladda New York Times.
Iyada oo Liibiya lagu wado inay qabato doorashooyinka madaxtinimo ee ugu sarreeya 24-ka Diseembar, Saif al-Islam wuxuu ka faa’iideystay baahinta warbaahinta si uu ugu dhawaaqo inuu ku soo laabto saaxadda siyaasadda.
Ma ahan markii ugu horreysay oo la shaaciyo soo laabashadiisa. Horeba bishii Maarj 2018, sida haddii la tijaabiyo ra’yiga, Jabhadda Caanka ah ee Liibiya, oo ah xisbi aan qarin ku-tiirsanaanta Qaddaafi, ayaa ka shaacisay Tunis in wiilka “boqorka boqorrada Afrika” uu u tartami doono madaxweynenimada.
Wareysiga NYT, Saif al-Islam, oo ku dhejinaya gadh cawlan oo ku labisan qamis madow (shaati dhaqameed) oo lagu xardhay astaamo dahab ah iyo cimaamad madow, kuma uusan sheegin inuu u tartami doono doorashada bisha December. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay inuu ku qanacsan yahay in dhaqdhaqaaqiisa uu soo celin karo “midnimadii luntay ee dalka.”
Tan iyo waraysiga, himilooyinkiisa siyaasadeed aad baa loo qaaday.
“Suurtagal ma aha in la arko Qaddaafi oo talada Liibiya qabta mustaqbalka fog. Gabi ahaanba ma aha wax aan la malayn karin, ”Emadeddin Badi, oo ah khabiir Liibiyaan ah oo cilmi -baare ka ah fikirka Maraykanka, Golaha Atlantic, ayaa u sheegay jowhar Online.
“Dhanka kale, weli wali waa goor hore maanta,” ayuu Badi ka digay. “Markaa waxaa aad u yar fursadda ah in, haddii uu yahay musharrax, Saif al-Islam uu ku guuleysan doono doorashada madaxweynaha ee December.”
Si kastaba ha ahaatee, qabiilka Qaddaafi, iyo gaar ahaan Saif al-Islam, ayaa weli caan ku ah dadka nostalgic iyo saraakiishii nidaamkii hore, iyo qabiilooyinkii daacad u ahaa qoyskii kaligii-taliyihii hore. Dareenka u janjeera Qaddaafi ayaa sidoo kale ku dhex jira qayb ka mid ah dadweynaha, oo ka niyad jabsan xasillooni darrada iyo rabshadaha daba dheeraaday ee dalka ruxay tobankii sano ee la soo dhaafay.
Waa mowjaddan nacaybka ah ee Qaddaafi soo laabanayo uu damacsan yahay inuu ku fuulo.
“Lacag ma jirto, ammaan ma jiro. Nolol dambe ma jirto halkan. Tag kaalmaha shidaalka: ma jiro gaas. Waxaan shidaalka iyo gaaska u dhoofinaa Talyaaniga. Waxaan daarnaa badhkii Talyaaniga oo halkan waxaan ka haysannaa koronto. Tani waxay ka badan tahay guuldarro. Waa fiasco, ”ayuu u sheegay NYT.
“Sanadihii la soo dhaafay, booska Saif al-Islam Gaddafi wuxuu ku soo kordhayay bulshooyinka qaarkood, gaar ahaan sababo dhaqaale, siyaasadeed ama amni, taas oo kicineysa hilow badan sannadihii Qaddaafi marka loo eego sanadihii ugu horreeyay ka dib dhicitaankii. Xukunka, markii aan laga hadlin soo noqoshada qabiilkan, ”ayuu yiri Badi.
Si layaab leh, wuxuu ku darayaa, “ifafaalahan xitaa waa laga dareemi karaa heerka jiilasha da’da yar, oo aan weli gaarin qaan -gaar intii uu noolaa Qaddaafi oo aan runtii la kulmin dabeecadda dhabta ah ee taliskiisa.”
Saif al-Islam, ikhtiyaarka Ruushka?
Xaqiiqda kaliya ee ku-soo-noqoshada Saif al-Islam waxaa loo arkaa inay tahay dhacdo macquul ah oo ka hadlaysa mugga, kaliya maahan xaaladda hadda ee dabaqadda siyaasadeed ee Liibiya, laakiin sidoo kale waxay ku saabsan tahay xeeladaha juquraafiyeed ee awoodaha shisheeye, ayuu raaciyay Badi.
“Waa inaanan iloobin in muuqaalkeedii ugu horreeyay ee warbaahinta loo qoondeeyay New York Times. Si kastaba ha ahaatee, shacabka Liibiya uma baran akhriska wargeyskan Maraykanka. Farriinta waxaa loo diray dhagaystayaal shisheeye ah iyo gaar ahaan waddamada ay u badan tahay inay aqbalaan ku noqoshada meheradda qabiilkaaga. ”
Runtii, Saif al-Islam ayaa weli ah ikhtiyaar siyaasadeed oo laga yaabo inuu weli xiiseynayo qaar ka mid ah jilayaasha shisheeye ee ka dagaallamaya Liibiya, oo uu ku jiro Ruushka. Gaar ahaan haddii aysan mar dambe helin Marshal Khalifa Haftar, oo ah ilaaliye Moscow, waxtar leh.
“In kasta oo ay aad ugu adkaan doonto Saif al-Islam inuu ku raaxeysto sharci ahaanshaha gudaha, wuxuu ku xisaabtami karaa taageero dibadeed,” ayuu yiri Badi.
“Ruushka, oo had iyo jeer xiriir siyaasadeed, ciidan iyo xitaa dhaqaale la leh qabiilka Qaddaafi, ayaa laga yaabaa inuu raadsado
A study finds that 30% of people in France are anxious before the…